Chelsea oo qaadday tallaabo aysan qaadan kooxaha Ingiriiska oo ku aaddan ka fal-celinta coronavirus – Gool FM
LONDON, ENGLAND - APRIL 16: Chelsea owner Roman Abramovich looks on from the stands during the Barclays Premier League match between Chelsea and Manchester City at Stamford Bridge on April 16, 2016 in London, England. (Photo by Paul Gilham/Getty Images)
(England) 16 Abril 2020. Kooxaha kala duwan ee ka dhisan qaaradda Yurub ayaa ka fikiraya sidii ay u soo kabi lahaayeen khasaaraha dhaqaale ee ay galeen kaddib markii uu cudurka Coronavirus dunida oo dhan saameeyay, garoommadii kubadda cagtana ka dhigay kuwa aanan la istic]’maalin.
Balse kooxda Chelsea ayaa iyadu u fikirtay si ka duwan kooxaha kale, waxaana ay hadda diyaarisay 78,000 oo cuntooyin ah oo ay siin doonto dalladda ka shaqeysa howlaha caafimaadka ee NHS iyo shaqaalaheeda lixda toddobaad ee soo aaddan, waxaana Blues ay u caafimaad qabka bulshada u aragtaa sheyga ugu muhiimsan ee mudan in la isu garabsado.
Toddobaadkiiba Chelsea waxay bixineysaa 13,000 xirmooyin cunno ah oo loo qaybin doono shan isbitaal oo ku yaalla magaalada London, iyagoo marin uga dhigaya dallada College Healthcare NHS Trust.
Kooxda Ingiriiska ah ayaa shaqaalaha NHS u furtay albaabada hoteelka Millennium ee ku yaalla garoonka Stamford Bridge, waxaana sidoo kale qarasha ku baxaya shaqaalaha hay’addaas damaanad qaaday milkiilaha Chelsea ee Frank Lampard.
Bruce Buck oo ah guddoomiyaha Chelsea ayaa sheegay in kooxdooda ay ku dadaaleyso caawinta bulshadooda gaar ahaan kuwa dhibaateysan, xilligaanna ay tahay waqtiga ugu muhiimsan.
“Milkiilaheena Roman Abramovich muhiim ayuu u yahay inaan la wajahno culeysyada ka imaanaya inaan taageerno dadka inoo baahan kaddib markii aan hore meel marinnay ole’olihii qoxootiga, sidoo kalena Millennium uu u fasaxay inay dagaan shaqaalaha hay’adda NHS. Taasi waxay ahayd arrin farxad leh, sidaas darteed aad ayaan ugu farxay inaan markale bilawno taageeridda bulshada noo baahan” ayuu yiri guddoomiyaha guud ee Chelsea.